Iwe haugone kudzvanya bhatani reKumba reiyo iPhone 7 kana ukashandisa magurovhosi | IPhone nhau
Iwe haugone kudzvanya bhatani reKumba reiyo iPhone 7 kana iwe uchinge wakapfeka magurovhosi
Kushamisika kudiki, zvine musoro zvekuti tanga tisina kana kumbozvibvunza. Zvinoitika kuti bhatani idzva uye rakagadziriswazve Kumba, iro rava kugona, harizokwanisi kushandiswa nemagirovhosi. Ichi chinhu chakasarudzika cheiyo nyowani iPhone chiri kuzogadzira zvimwe zvemusoro wevashandisi ve iPhone 7 munguva ino yechando. Kwete zvese zvinopenya igoridhe kana zvasvika pakutsiva iyo yechinyakare bhatani iro Apple rave kudhonzera kwemakore mapfumbamwe nebhatani rekubata. Apple haina kutaura chero chinhu nezvazvo, uye chokwadi ndechekuti icho chinhu chekufunga nezvacho munguva yechandoKunyanya nekuti kana tichida kushandisa iyo iPhone mumugwagwa tiri kuzomanikidzwa kutonhora zvakanyanya mumawoko.
Zvanga zva Myke hurley uyo akacherekedza ruzivo uye akagovana pasocial network nekukurumidza:
Neiyi nzira takazviona izvozvo Hatizokwanise kushandisa bhatani reKumba kana munwe urikudzvanya wakafukidzwa. Nekudaro, izvo zvinoita sekunge zvinoshanda magurovhosi anozivikanwa anotendera kushandiswa kwemafoni nhare, zvishoma hachisi chinhu. Nekudaro, zvinoita sekunge hazvisi zvese zviri pachena, magiravhusi egatex semuenzaniso haimise bhatani reKumba, asi anotibvumidza kushandisa iyo iPhone skrini.
Izvi zvichagadzira hurukuro inonakidza pamusoro pekushandisa kwechigadzirwa uye nei Apple isingagovane ruzivo rwepamutemo nezve ichi chinhu chechinhu. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, iyo nyowani Bhatani bhatani reiyo iPhone 7 haisi yemuchina bhatani, asi bhatani rekubata iro rinoteedzera mhinduro yekutenda kune iyo iPhone 7's taptic sensor. Ichokwadi ndechekuti isu takakwanisa kushandisa iyo iPhone 7 uye nzira yainoteedzera nayo bhatani remuchina inoshamisa, zvisinei, iyi ndiyo yekutanga uye tinovimba kuti dhiri rekupedzisira ratakakwanisa kuwana kushandisa tekinoroji iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iwe haugone kudzvanya bhatani reKumba reiyo iPhone 7 kana iwe uchinge wakapfeka magurovhosi
Chero ani anoziva kuti nemaGLOVES hapana chinoshanda pane smartphone ... iyo skrini yekutanga, muverengi weminwe yechipiri, uyezve bhatani repamba reiyo iphone 7 kana uye izvi zvakajairika.
Kuti izvi zvishande kuti ushande, iwe unoda magurovhosi anoshanda ne touch skrini (ayo akatetepa).
MuCanary Islands hatizove nedambudziko iri !!
Ini ndotokuudza iwe, compi, haha, izvo zvatino chengetedza pamaoko ... uye pane gasi bhiri! haha
Yuri morales akadaro
Unoipedzera pamhepo inodzora, hahahaha
Pindura kuna Yuri Morales
Kuramba kwemvura kweiyo iPhone 7 pakadzika kwemamita gumi
Kuvapo kwekumira kweIntel SoC muiyo iPhone 7 inosimbiswa